Raw YK-11 Powder (431579-34-9) Ndị na-emepụta - Phcoker Chemical
Nwunye YK-11 dị elu (431579-34-9)
YK-11 ntụ ntụ bụ nke otu ndị na-ahọrọ androgen modulators (YK11 ntụ ntụ). Ihe ọma, ihe YK11 na-eme bụ nhọrọ ……
Fọl YK-11 dị elu (431579-34-9) video
Nwunye YK-11 dị elu (431579-34-9) Nkọwa
YK11, nke a makwaara dị ka Myostine, bụ ihe a na-ewere dị ka otu n'ime YK11 ntụ ike siri ike na ahịa. Ọ bụ ụda steroidal nhọrọ androgen receptor modulator. Ọgwụ nwere ọrụ anabolic na vitro na C2C12 myoblasts ma gosipụta ikike dị ukwuu karịa dihydrotestosterone (DHT) na nke a. YK11 bụkwa onye na-egbochi Myostatin. Ha nwere ike inyere gị aka inweta akwara na ida abụba.
Esi YK-11 dị elu (431579-34-9) Smmezi
Product Name Raw YK-11 ntụ ntụ
Chemical Aha YK11, (17a, 20E) -17,20 - [(1-Methoxyethylidene) bis (oxy)] - 3-oxo-19-norpregna- 4,20-diene-21-carboxylic acid Methyl Ester; YK11 ((17A, 20E) -17,20 - [(1-methoxyethylidene) bis- (oxy)] - 3-oxo- DNA (Mpempe mkpụrụ ndụ YK11 16S rRNA) na GenBank AB070463
Klaasị ọgwụ ọjọọ YK11 ntụ ntụ
molekụla Fnhazi C25H34O6
molekụla Wasatọ 430.53386
Nkịtị Monoisotopic 430.236 g / mol
Mgbu Point 190-200 ° C
Fna-agbanyeghachi Point Enweghị data maka dịnụ
Ọkara Ndụ nke Ndụ Oge 6-10, dabere na onye ọ bụla
Agba White siri ike
Sume Propylene Glycol, DMSO, Ethanol
Raw YK-11 ntụ ntụ Antinye Androgen Receptor Modulator, Onye na-eme ihe ngwa ngwa
Raw YK-11 uzuzu (431579-34-9) Nkọwa
Ọtụtụ ndị ọrụ chere na YK11 bụ isi ụzọ maka ịmeghe ahụ mmadụ niile ma nweta uru ngwa ngwa nwere uru ole na ole. O kwukwara na YK11 nwere ikike ibelata ọrụ myostatin, na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbochi myostatin. YK-11 bụ n'ezie otu n’ime ndị siri ike na-apụ apụ. I nweghi ike iji YK tụnyere LGD-4033 ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ọzọ maka etu esi ike ya.
Agbanyeghị, ọbụlagodi YK-11 raw ntụ dị siri ike na-eche n’uche na e nweela naanị ọmụmụ ole na ole ejiri ebe a. Nke a bụ isi ihe kpatara na ọtụtụ mmadụ na-achọkarị iso ndị ọzọ dịka Ostamuscle, RAD-140 ma ọ bụ GW-501516.
YK11 na-enwetara mmasị site na ndị na-ahụ maka ahụ ike ya ngwa ngwa iji rụpụta akwara ngwa ngwa.
Otu nnyocha cellular na-enye echiche na YK11 na-amụba ụzụ muscle. Ndị nchọpụta chọpụtara na ọ na-eme ka ụbụrụ protein na-emepụta ahụ ike (onye na-emechi ihe mgbochi).
YK11 nwekwara ike iwusi ahụ ike nke ọkpụkpụ. N'ime ọmụmụ ihe na mkpụrụ ndụ ọkpụkpụ, YK11 mụbara ogo nke protein ndị ọkpụkpụ.
Ụfọdụ bodybuilders, bụ ndị nyochaworo YK11, na-akọ oké uru ahụ na oke abụba na oke mmetụta dị nta. Otú ọ dị, ugbu a, ọ dịghị anụmanụ ma ọ bụ ọmụmụ mmadụ nke YK11 na nchekwa ya adịghị edozi.
Ntụle YK-11 dị elu (431579-34-9) Ngosipụta nke Action
YK11 nwere ụdị ihe yiri nke DHT na nke a na-egosi site na ọ na-ejikọta ndị na-anabata etrogen. Ahụ na-emepụta DHT maka ọdịmma nke ịkwalite ahụike prostate, eto ntutu, na mmepe oge kwesịrị ekwesị.
Ndị nchọpụta mere nchọpụta cell iji chọpụta otú o si arụ ọrụ iji wuo ahụ ike. Nsonaazụ ya na-egosi na ọ bụ naanị iji mee ka ọganihu na-arị elu. Follistatin bụ ihe ọzọ na-emepụta protein na ahụ mmadụ nke na-enyere aka ịchekwa ihe mgbochi. Myostatin bụ hormone nke ọrụ ya bụ iji gbochie nkwụmkpụ azụ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, nanị YK11 raw ntụ ntụ nwere ikike ịmebi ihe mgbochi.
Ihe àmà ọzọ na-enye echiche na YK11 nwekwara ike ịkwalite uto ọkpụkpụ site na itinye aka na ọnụ ụzọ ámá dịka DHT.
uru nke uzu uzo YK11 (431579-34-9)
Na-emewanye Ụdị Muscle
YK11 nwere ikike dị egwu iji mee ka akwara too uto.
Nke ahụ bụ n'ihi na ọ na-emekarị ka ọganihu na-arịwanye elu nke na-eme ka ahụ gị nwee ike ịmepụta sel ahụ. Ọkpụkpụ ụbụrụ na-ebutekwa maka igbochi myostatin, si otú a meghee gị ruo n'ikike nke ịzụlite ahụ ike. Ma oburu na egbochi nsogbu n 'uzo ozo n' uzo obula, mgbe mgbochi mberede enweghi ike ime, nke ga-eme ka YK11 ghara irite.
Ịghara ịda ụda dị ka akwụkwọ agbajọrọ ma ọ dịghị ihe ọmụmụ mmadụ ma ọ bụ anụmanụ iji weghachite data na ụlọ ọrụ a.
Ihe niile anyị nwere bụ ihe akaebe nke anecdotal nke dabeere na nyocha ndị mmadụ na-enwe na forums online. Ihe ha na-agwa anyị bụ na ha enweela ike ịba uru dị ukwuu ma na 15 lbs bara uru nke na-enweta uru ahụ na obere oge.
Homonụ mmekọahụ dị mkpa maka ijigide ọkpụkpụ siri ike. Ihe akaebe a na-egosi na YK11 raw powder nwere ike iwelie ike ọkpụkpụ site na ijikọ onwe ya na ndị na-anabata androgen.
YK11 nwekwara ike ime ka ọnụ ọgụgụ PKB (protein kinase B) rụọ ọrụ dị n'ime sel nke ahụ nke na-eme ka mkpụrụ nke ụbụrụ dị.
Echefula na ịchọrọ ịkpụ ahụ ike, ahụike na ọkpụkpụ iji gbochie ọdịda. Ọ nwere ike inye aka na nke a nakwa n'ihi na ọ dị irè n'ịrụ ụlọ ahụ, na-akwado ọkpụkpụ ọkpụkpụ ma na-egbochi mmetụta nke fragility ọkpụkpụ.
Ntụle YK-11 dị na-atụ aro (431579-34-9) Ụdị
Ndị na-ahụ maka ahụ ejirila YK11 raw ntụ ntụ na-ekwu na ị itụ ya na usoro nke 10 ruo 15 mg kwa ụbọchị na-arụ ọrụ dị mma maka ha. Ndị ọzọ akọpụtala ezigbo mmetụta na 5 mg kwa ụbọchị. Imirikiti ndị ọrụ na-emegharị ya maka izu anọ na asatọ.
Nsonaazụ Raw YK-11 ntụ ntụ (431579-34-9)
▲ N'ihe dị ugbu a, ọ bụ nanị ọmụmụ ihe omumu ka e duziri na YK11.
Enweghi ihe akaebe ogwugwu ma o bu ihe ndi ozo bu iji weghachi ihe obula a na-ekwu banyere ogwu.
Nke a kwesịrị ime ka ị chee ugboro abụọ banyere nchọpụta na onyinye a. Ikekwe ị ga-enyocha ebe dị iche iche dị ka Ostarine na Ligandrol. Ha nwere ọtụtụ ihe ọmụma na nnyocha dị.
A na-ekwu na YK11 nwere ike bụrụ ọnya imeju na imeju. Iji kwuo okwu, ọ nwere ike imetụta uto ntutu, ụda olu, ahụike prostate na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa na ahụ.